Nanitsakitsaka ny dinam-piarahamonina ao amin’ny firenena ve ny sazy vaovao amin’ny fandroràna ao Kyrgyzstan? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2019 7:26 GMT
‘Ilay sokatra mandrehoka’ avy amin'i Jon Bragg. Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0). Ho fandravahana ihany.
Nanomboka ny taona 2019 tamin'ny tabataba mikasika ny fanitsiana mampiady hevitra tamin'ny Fehezan-dalàna Famaizana (heloka bevava) i Kyrgyzstan izay nampiditra onitra goavana amin'ireo fandikan-dalàna ara-panjakana vaovao sy fampitomboana ny vesatra tamin'ny heloka teo aloha. Rafitra vaovao iray toa miraikitra ao an-tenda ny Andininy faha-71 noforonina vao haingana, izay mandràra ny fandroràna imasombahoaka, manana onitra mitovy amin'ny ampahatelon'ny karama ankapobeny isam-bolana ao amin'ity firenena Aziatika Afovoany ity.
Nampiditra fepetra mitovy amin'izany teo amin'ny sehatry ny fahadiovana ny firenena tahaka an'i Shina sy Singapaoro tamin'ny lasa. Mijaly noho ny taha ambony amin'ny raboka izay miparitaka amin'ny alalan'ny rora i Kyrgyzstan. Nilaza ny Praiministra Mukhametkhali Abylgaziyev fa ilaina ny fepetra mba hampisy “fahatsiarovan-tena ara-tsosialy” saingy nanasongadina koa fa azo ahena ny sazy sasany. Nanome ny fanohanany ireo fanasaziana vaovao, indrindra ireo izay mifandray amin'ny fiarovana ara-pifamoivoizana ny filoham-pirenena Sooronbai Jeenbekov, ary nilaza fa tokony hianatra “hanaraka fitsipika” ny olom-pirenena Kyrgyz.
Manodidina ny 5 500 Kirgiza soms, na 80 dolara ny onitra vaovao amin'ny fandroràna, volabe izany ao amin'ny firenena izay ambony kely ny 200 dolara monja ny karama ankapobe isam-bolana.
Tovolahy iray no naka lahatsary azy nandrora teo amin'ny vavahadiben'ny lapan'ny governemanta ao Kyrgyzstan, fantatra amin'ny anarana hoe Trano Fotsy, ary mandraviravy ravin-taratasy 5.000 sy 500 soms ao amin'ny fakantsary.
“Iny, tongava ary alaivo ny onitranao,” hoy i Ramis Zakiriyev, izay nandefa ny hafany ho an'ireo “mpiasa birao taloha sy ankehitriny izay mangalatra sy nampiditrosa ny firenena.”
Nanamafy ny polisy fa voampanga tamin'ilay fandikan-dalàna i Zakiriyev taty aoriana.
Fihazonana tsy ho rava ny dinam-piarahamonina
Nahatafavoahana ny tsara indrindra teo amin'ny fiarahamonim-pirenena mavitrika sy mahay mandresy lahatra ihany koa anefa ny tabataba mikasika ilay onitra. Mikasa hametraka ny onitra amin'ny sary lehiben'ny faha-28 taonan'ny fahaleovantenan'i Kygyzstan i Azim Azimov, talen'ny Media Kitchen sady mpaneho hevitra ara-politika malaza. Ny vokatra azo dia fanadihadiana ara-politika lalina tao amin'ny bilaoginy an-dahatsary antsoina hoe Context.
Nanonona ilay mpandinika Frantsay Jean Jacques Rousseau sy ilay amin'ny teny anglisy Thomas Hobbes i Azimov nanamafy fa nametraka fanamby tamin'ny endrika “dinam-piarahamonina” tsy manintona saingy miasa eo amin'ny governemanta sy ny vahoakany ilay onitra.
Nanamarika izy vao haingana fa naongana ny governemanta Kyrgyz rehefa niezaka naka vola bebe kokoa tamin'ny vahoaka kanefa tsy manome tolotra tsara ho an'ny daholobe ho setrin'izany. Nitranga izany satria nanitsakitsaka ny fifankahazoana izay niorenan'ny dina ry zareo: “Tsy mikitika anay ianareo dia tsy mikitika anareo izahay.”
Saingy raha nanakiana ny governemanta tamin'ny tsy nampahafantarany ny vahoaka momba ny onitra i Azimov, dia nanamafy izy fa tsy tokony hihemotra ny governemanta manoloana ny fahatezeram-bahoaka noho ny fampidirana ireo lalàna ireo. Mety hanimba ny tena hevitry ny lalàna ny fihemorana, no sady manome hery ny “tangoron'olon'ny Facebook”. Mety ho niombon-kevitra tamin'izany i Pilato.
Ireo hiran'ny fandroràna
Ankoatra ny fanadihadian'ny manam-pahaizana, niteraka hadalana betsaka ny lalànan'ny fandroràna. Ohatra iray ny lahatsarin-kira “Lalàna” etsy ambany. Mampiseho tovolahy manao satroka sy akanjo mafana ambony ambany, fantatra nandritra ny vanim-potoanan'i Firaisana Sovietika teo aloha amin'ny anarana hoe ‘gopniki’ ilay horonantsary malaza ao amin'ny Facebook, izay miezaka miaro ny zon'izy ireo hanana fitondran-tena ratsy imasombahoaka no sady manohitra ilay onitra vaovao.
Nampiseho kosa ny tantara fohy mamazivazy niparitaka be tao amin'ny media sosialy fa ny tena antony nahatonga ny sazy vaovao dia ny fandoavan'i Kyrgyzstan ny trosan'i Shina efa ho iray miliara dôlara mahery.
Raha samy mandrora in-telo avy ny olom-pirenena enina tapitrisa ao amin'ny firenena, dia ho ampy ho an'ny governemanta izany handovana ny trosa, hoy ny gidro iray tamin'ny iray hafa.
Tsy afaka mijanona eto intsony aho. Feno rehoka ny Twitter-ko
Raha naneho toraka ranoka fampitandremana ho an'ny governemanta menatra ny hanao fanavaozana ilay lahatsary tsy fankatoavana sivily amin'ny fandroràna nataon'i Ramis Zakiriyev, fa olona iray kosa farafahavitsiny vonona ny hanaraka ny fitsipi-pifehezana sy ny andraikitra ara-tsosialy resahan'ny mpitarika ny firenena.
Horonantsary fohy iray nalaina tao anaty fiara kosa nampiseho lehilahy toa mikapoka sisin-dalana ao an-drenivohitr'i Bishkek, siny eny an-tanana, manasa ireo mpandalo izy mba hanipy zavatra. Mety ho ny fanombohan'ny zavatra tena tsara tokoa ve ireo onitra goavana ireo?